आज यति धेरैले घट्यो सुनको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार….. – SUDUR MEDIA
आज यति धेरैले घट्यो सुनको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार…..
June 10, 2021 AdminLeaveaComment on आज यति धेरैले घट्यो सुनको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार…..
आज बिहीबारको दिन सुनको भाउ सामान्य घटेको छ भने चाँदीको भा भनेउ बढेको छ। आजको दिनमा सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदीको तोलाको ५ रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बिहीबारको दिन छापावाला सुन प्रतितोला ९३ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ४०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
अघिल्लो दिन हिंजो बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार ४०० र तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ९०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो । यस्तै चाँदी पनि तोलामा ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार ३५५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । अघिल्लो दिन हिंजो चाँदी प्रतितोला १ हजार ३५० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः यो साता हुँदैछ यी राशिहरुको भाग्योदय, जेठ २३ देखि २९ गतेसम्मको राशिफल हेर्नुहोस् ! मेष राशि- स्वास्थ्यमा सुधारको संकेत देखिन्छ । प्राविधिक क्षेत्र सबल रहनेछ । अध्ययन–अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागी भइएला । कार्यमा सफलता मिल्नेछ । कार्यमा मित्रको सहयोग पाइनेछ । लेखन र कलाको क्षेत्रमा सफलता पाइनेछ । स्थानान्तरणको योग छ । नयाँ योजना बन्नेछन् । पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध समधुर रहला ।
आफ्नो पूर्वपतिले अर्को विवाह गर्ने खबर सुनेपछि मिना ढकाल आ’गो, मनोजले से’ क्सको लागि विवाह गर्न लागेको आ’रोप ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (3,041)
टिकटकमा भाइरल बनेकी राउटे युवतीलाई हो.टलमा लगेर यौ.न दु.र्व्य.वहार गरेको भिडियो बाहिरीएसंगै संलग्न ३ जना युवक प.क्राउ….. (2,023)
सुनचाँदीको मूल्य फेरी ह्वात्तै घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ….. (1,581)
अन्माएर गाडीमा चढीसकेकी बेहुली अंकललाई अंगालो हालेर बेहुलाको घर नजाने भन्दै नछोडेपछी भिडियो भयो भाइरल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (1,452)
आज शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो….. (1,325)